Sivanina ny Huawei Watch GT2 izay haseho amin'ity herinandro ity | Androidsis
Amin'ity alakamisy ity dia hatolotra amin'ny fomba ofisialy ny farany avo lenta an'ny marika sinoa, ny elanelan'ny Huawei Mate 30. Toy ny mahazatra ao amin'ity karazana hetsika ity dia afaka manantena vokatra hafa ankoatr'ireo telefaona ireo isika. Toa handao antsika amin'ny famantaranandro vaovao ny orinasa, miaraka amin'ny Huawei Watch GT2. Ny tsipiriany momba ity famantaranandro vaovao ity dia efa tafaporitsaka.
Amin'ity tranga ity dia i Evan Blass no nandefa sary maromaro izay ahitanao azy ity Huawei Watch GT2 ity. Misaotra azy ireo isika afaka mahazo hevitra mazava momba ny fanovana izay handao antsika ny famantaranandron'ity mpanamboatra vaovao ity. Ho fanampin'izany, asa vaovao no andrasana ao.
Ny Huawei Watch GT2 dia havoaka amin'ny loko isan-karazany, araka ny hita amin'ny sary. Hisy loko na safidy efatra hisafidianana. Na dia hisy ny kinova famantaranandro dimy izay hamela antsika amina endrika hafa, miaraka amina endrika akaiky kokoa ny famantaranandro nentim-paharazana. Satria mety hanana satro-boninahitra aza izy io, toy ny famantaranandro mahazatra.
Ny marika sinoa dia manolo-tena amin'ny famolavolana madio amin'ity tranga ity, maoderina kokoa, ary izany dia mety ahafahan'ny mpampiasa mankafy kokoa. Amin'ireo fiasa izay mety ho hitantsika ao aminy, tsy dia be loatra ny fanondroana nomena. Na dia antenaina hisy aza ny vaovao sasany.
Na dia toa raisina ho azy aza io asa io ho eo dia hanao antso. Ny antso dia azo atao amin'ity Huawei Watch GT2 ity. Saingy tsy izany ihany koa ny zavatra nohamafisin'ny marika sinoa hatreto. Ka tsy maintsy miandry hatramin'ny alakamisy vao hahalala isika.
Io no vokatra voalohany izay hatolotra miaraka amin'ny Mate 30 ny voalaza. Tsy fantatray raha tsy afaka mahita vokatra hafa amin'ity hetsika ity izahay, ankoatr'ity Huawei Watch GT2 ity izao. Saingy handinika vaovao bebe kokoa amin'ity lafiny ity isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Watch GT2 dia haseho miaraka amin'ny Mate 30
Hita amin'ny horonan-tsary ny enta-mavesatra SuperVOOC 65W an'ny OPPO